Dia fanafoanana Just Katolika Fisaraham-panambadiana? – 2trondro
Home / Fiangonana / Issues / Dia fanafoanana Just Katolika Fisaraham-panambadiana?
Ny olona sasany manontany: “Tsy izany no mihatsaravelatsihy ny Eglizy Katolika mba mahazo mandrara ny fisaraham-panambadiana, fa ny fahazoan-dalana annulments?”
Na dia mety ho toa nihatsaravelatsihy, misy raha ny marina ny fototra samy hafa ny amin'ny fisaraham-panambadiana sy ny fanafoanana.
Ny fisaraham-panambadiana dia ny ezaka mba handrava ny manan-kery ny fanambadiana.
An fanafoanana, na, kokoa araka ny tokony ho, iray didim-panjakana nullity, dia ny fanambarana fa ny fanambadiana dia simba hatramin'ny voalohany.
Satria ny singa ilaina ho marim-pototra na oviana na oviana fanambadiana no nanatrika, ny fanambadiana raha ny tena na oviana na oviana nitranga.
Mba ho an'ny Fiangonana mba hanome didy ny nullity, noho izany, tsy maintsy irrefutably hita fa ny zavatra ilaina dia tsy tonga hatrany am-piandohana. The Katesizin'ny Fiangonana Katôlika firenena, "Ny fanekena [hanambady] dia tsy maintsy ho asa ny sitrapon'ny tsirairay ny Arakaraka antoko, maimaim-poana ny fanerena na tahotra lehibe avy any ivelany. Tsy misy hery afaka nisolo izany fanekena. Raha toa ka tsy ampy izany fahafahana ny fanambadiana Tsy mety " (amin'ny. 1628).
Indraindray, misy ny ahiahiny momba ny ara-drariny natsangana ny ankizy avy amin'ny fampakaram-bady izay efa nambara tsy mety.
Noho ny fanomezana ny didy ny nullity misy ifandraisany amin'ny ara-tsakramenta toerana misy ny fanambadiana ihany, fa tsy ny sivily sata, ny maha ara-dalàna ny ankizy novokarin'ny ny fanambadiana dia unaltered.
Ny didim-panjakana nullity tsy mandà ny fanambadiana sivily nitranga; dia mandà an'i misy fanambadiana ara-tsakramenta nitranga.
Toy izany koa, ny Fiangonana dia afaka manome ny fotoampitantanana namela iray mba hanambady ambany toe-javatra izay tokony voarara-hanambady olona iray izay tsy vita batisa, ohatra, fa ny Fiangonana dia tsy manome ho an'ny faharoa fotoampitantanana fanambadiana.